Maqaallada Andrew Angle ee Martech Zone |
Maqaallada by Andrew xagal
Andrew Angle waa aasaasaha NetGain Associates, Inc. oo wuxuu ku dhex milmay suuq geynta dijitaalka tan iyo markii uu webku cusbaa. Asal iib ah, wuxuu ka dhisay oo dayactiray degello warshado badan oo ay ka mid yihiin kuwa aan faa'iido doonka ahayn, maareynta maaddada, dhismaha, daryeelka caafimaadka, qorista IT-ga, ganacsiga elektarooniga ah, dhaqdhaqaaqa shaqsiga, iyo qalabka macaamiisha. Isku soo wada duuboo mashaariicda suuq geynta dijitaalka ayaa ku baahsan kooxo horumarineed guud ahaan 15 dal. Mantaradiisu waxay tahay, "Internetka, juqraafigu waxba kuma khuseeyo."
Arbacada, Juun 10, 2020 Arbacada, Juun 10, 2020 Andrew xagal
VirBELA waxay u dhistaa adduunyo dalxiis oo dheeri ah dhacdooyinka, barashada, iyo shaqada.